चन्द्रशमशेरसँग तीहारमा पासा खेल्न जमिन्दारहरु लाखौंका सिक्का बोकेर पुग्थे दरबार ! – Samatal Online
चन्द्रशमशेरसँग तीहारमा पासा खेल्न जमिन्दारहरु लाखौंका सिक्का बोकेर पुग्थे दरबार !
काठमाडौं । दशैं तथा तिहारमा मानिसहरु ठूलाे मात्रामा जुवातास खेल्छन् । जुवातास खेल्न र खेलाउन कानूनले अपराध मानेपनि लुकीछिपी सानाे खाल मात्र हाेइन ठूला-ठूला खालहरु समेत खेलाउने गरिएको पाइन्छ ।
केही दिन अघिमात्र प्रहरीले काठमाडौंमा झण्डै तीन करोड नगद सहित जुवातास खेल्ने र खेलाउनेलाई पक्राउ गर्‍यो । जुवातास खेल्ने खेलाउने विरुद्धको अभियानलाई प्रहरीले मुलुकभर तीव्र बनाइरहेको छ ।
त्यसो त यस्तो जुवातास अहिले मात्र होइन राजा महाराजाका पालामा समेत प्रचलनमा थियो । कहिले सकुनी पासा, कहिले काैडा हुँदै अचेल तीनपत्ती सम्म पुगेको छ ।
राणाकालमा यमपञ्चक अबधिभर चन्द्रशमशेरले ऐयासी, विलासी, कुलिन, घरानियाँ र साहु, महाजन तथा जमिन्दारका लागि जुवा खेल्न आफ्नो बैठककक्ष खुला गर्ने गर्दथे ।
पासा वा कौडा खेल्न गएकाहरुको पैसा नसकिँदासम्म यही प्रक्रिया दोहरिइरहन्थ्यो । यस्तो रित तिहारको यमपञ्चकभर खुल्ला हुन्थ्यो र श्री ३ को दरवारमा कौडा वा पासा खेल्न जानेहरुको भीड नै लाग्दथ्यो । त्यति बेलाको मान्यता थियो श्री ३ सँग पासा खेल्नु भगवान विष्णुसँग पासा खेल्नु बराबर हो, यसले सबै पाप नष्ट हुन जान्छ र मोक्ष प्राप्ती वा स्वर्गको ढोका खुल्छ ।
पैसा त सबै श्री ३ ले खाइदिए भनेर यदि कसैले भन्यो भने यो त विष्णुका अवतारलाई चढाएको भनी प्रशन्न मुद्रामा जवाफ दिने गर्दथे, जुवा खेल्न दरवार पुगेकाहरु !